सरकारी गाडीमा हनिमुन ? को हुन् यी भाइरल जोडी ? « Onlinetvnepal.com
सरकारी गाडीमा हनिमुन ? को हुन् यी भाइरल जोडी ?
Published : 25 April, 2019 1:13 pm
सरकारी गाडीको दुरुपयोग हुनु नौलो कुरा होइन । बेलाबेलमा श्रमतीलाई माइत,ब्यूटिपालर र छोरा छोरीलाई स्कुल एरपोर्ट पुर्याउन जानु स्भाबिक नै मानिन्छ । तर यसपटक भने नौलो कुरा नै देख्न पाइयो । यसपटक देखिएको नौलो कुरा बा २ झ १६५० नम्बर सरकारी गाडी हो ।
माथिको तस्बीरमा देखिएको गाडी सेतो नम्बर प्लेटको छ । गाडीमा खिचिएको उक्त फोटो होर्दा असामन्य देखिन्छ । एक त सरकारी गाडी त्यस गाडीमा दुइ जना युवायुवती फिल्मी शैलीमा पोज । यस फोटोमा यी जोडी बिहेपछि हनिमुन बनाउन गएका जस्तो देखिन्छ । यस फोटोमा युवती चट् परेकने लेह्गा र युवा कोट पाइन्टमा सजिएका छन् । यसो हेर्दा पढेलेखेका जस्तो देखिने मानिसले यस्तो व्यबहार देखाएपछि सामाजिक संजालमा भाइरल बनेको हो ।
सरकारले सार्वजानिक विदाको दिन सरकारी सवारी साधन सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । सञ्चालन गर्न अतिआवस्यक भएको खण्डमा मात्रै अनुमति लिएर चलाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर हनिमुनमा लौजान पाउने व्यवस्था गरेको छैन् ।